तिमी पार्टिको कार्यकर्ता कि फलानो? - News Book Online
विशाल/म विद्यार्थी तिम्रो पार्टी बिना मेरो विद्यार्थी जीवन चलेन,।सडकमा निस्कन्छु ढुङ्गा मुडा इटा बर्षाइरहेका छन।तिनीहरु पनि विद्यार्थीको पार्टिको कार्यकर्ता।मेरा शिक्षक तिनीहरु पनि सामाजिक सन्जालमा केही राजनीतिक कुराहरू राख्छन,तिनिहरु पार्टिका कार्यकर्ता कि शिक्षक?
पत्रकार जो एक दुई शब्द माथी उठेर लेख्न थाल्छन,तब तिमीहरूले पिन्जरामा थुनेको सुगा जस्तै बनाउछौ,अनि समाजले प्रश्न गर्छ तिमी पत्रकार कि पार्टिको झोले?
जब म कसैले सामाजिक संजालमा आफ्ना विचार राख्न थाल्छ ,तब वाद विवाद ,तछाड मछाड हुन थाल्छ।तिमिहरु छिमेकी कि पार्टिको झोले?
मलाई त्यही समाजले प्रश्न उठाछ,जहाजको मानिसहरू केही पैसामा विकेर,देश बिगारेको छन? मलाई त्यहीका जनताले प्रश्न उठाछ,जो कसैको केही प्रतिक्रिया सहन सक्दैन ,आखिर हामी किन आफै विछ्याइएको जालमा परेर छटप्ट्याइरहेका छौ त?
आखिर पत्रकारको पार्टिबिना पेसा नै धरापमा पर्न थाल्छ त के गरोस् त उ? आखिर कुनै विद्यार्थीको पार्टीबिना भविष्यमा पर्छ ,के गरोस त उ? आखिर कुनै शिक्षकले पार्टीविना जीवन नै गुजार्न सक्दैन,त के गरोस उ? बन्द गरौ यी प्रश्न,तपाईं पार्टिको झोले कि फलानो त?
हामी आफै लाई गिज्याइरहेका छौ।कुनै राजनितिक विचार धारणा राख्दैमा कोहि पार्टिको झोले हुन सक्दैन।